Muuri News Network » DHAGEYSO: C/raxmaan Faroole oo si kulul u weeraray Gudoomiye Jawaari iyo Wasiir Xoosh…
DHAGEYSO: C/raxmaan Faroole oo si kulul u weeraray Gudoomiye Jawaari iyo Wasiir Xoosh…
Dec 24, 2017 - Comments off
Madaxweynihi hore maamulka Puntland ahna Xildhibaan ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamanka Soomaaliya,Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud(Faroole) oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Garowe ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan Xaaladda Soomaaliya.
Waxaa uu eedayn kulul u jeediyey guddoonka Golaha Shacabka Soomaaliya oo uu sheegay in ay faro-gelin xooggan ku hayaan Dowlad Goboleedyada dalka,islamarkaana ay burburinayaan Nidaamka Federaalka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in taasi ay tahay Nasiib daro weyn , islamarkaana hadda aan loo baahan yahay in dalka dib loo celiyo.
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya, ayuu ku eedeeyay in uu Dastuurkii ku falaaday oo buug jeebkiisa ah qortay,waxaana Faroole sheegay in arrintaasi ay fududaysay UN-ka gaar ahaanna hay’adda UNDP.
Hay’addaha Qaramada Midoobey ayuu ugu baaqay in ay si deg deg ah faraha kala baxaan arimaha dastuurka.